Nagu saabsan - Zhangjiagang Hongshida Textile Trading Co., Ltd.
Zhangjiagang Hongshida Textile Trading Co., Ltd. inta badan waxay ku hawlan tahay cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda, soo saarista iyo sidoo kale soo dejinta iyo dhoofinta agabyada cusub, iyadoo ay la socdaan alaabooyin ay ka mid yihiin looxyo codad qaadanaya, guddiyada ololka celinaya, naylon, polyester iyo dhar kale oo cayriin qalabka. Waxay ku taal 21 Xinzha Middle Rd., Magaalada Yangshe, Zhangjiagang, Suzhou, warshaddeenu waxay dabooshaa in ka badan 20,000 m2. Tan iyo aasaaskeedii, waxay u heellanayd cilmi-baarista iyo horumarinta qalabka fiber-ka muddo ku dhow 20 sano. Shirkadeena waxay leedahay laba shirkadood oo hoosaadyo ah. Mid waa Zhangjiagang Xinlun Textile Co., Ltd., oo ku takhasustay cilmi baarista iyo horumarinta nayloon, polyester iyo fiilooyinka polypropylene. Midda kale waa Suzhou Lishengyuan qalabka cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd., oo macaamiisha siisa xalal acoustic xirfadeed leh kuna howlan horumarinta iyo soo saarida qalabka fiyuus-polyester-ka ah. Ku go'doomay baacsigayaga joogtada ah ee tayada sare leh, waxaan soo dhoofineynaa qalab wax soo saar otomaatig ah oo heer caalami ah oo heer sare ah sanadkii 2002, iyadoo ujeedadu tahay soo saarida wax soo saarka ay macaamiisheena ku qanci doonaan.
Xinlun Textile wuxuu bilaabay inuu soo saaro fiber nylon staple sanadkii 2002. Ma aha oo kaliya inuu leeyahay khibrad qani ku ah wax soo saarka, sidoo kale wuxuu ku qalabeysan yahay awoodo tijaabo oo dhameystiran iyo hogaaminta fikradaha R&D. Waqtigan xaadirka ah, waxay leedahay toddobo urur oo muhiim ah naylon muhiim ah iyo daraasiin urur-hoosaadyo ah, oo ay ku jiraan, fiilooyinka caadiga ah, fiilooyinka xoogga sare leh, fiilooyinka la faafiyey, fiilooyinka midabaynta ee xalka ceyriinka ah, fiilooyinka ololka ololaya iyo fiilooyinka waxqabadka leh. ku miiqdaan suuf ， rayon iyo polyester dhogor ah. Ka sokow, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dhar aan tolmo lahayn, maaddooyin xoqan, bustayaal warqad sameeya iyo beero kale. Tilmaamaha ugu muhiimsan waxay u dhexeeyaan 0.8d ilaa 30d, oo dhererkeedu yahay 38mm ilaa 130mm. Shirkadda waxaa ka go'an inay la kulanto baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisheenna isla markaana ay u abuurto qiimeyo iyaga u gaar ah. Iyada oo ku saleysan jawaabta degdegga ah iyo wax soo saarka dabacsan, shirkaddu waxay u heellan tahay cilmi-baarista, horumarinta iyo soo saaridda fiilooyinka naaska ee shaqeynaya Dhanka kale, waxay sidoo kale si firfircoon ugu sii fideysaa suuqyada dhamaadka-sare ee gudaha iyo dibaddaba Adiga oo ku adkeysanaya hal-abuurnimo madax-bannaan, waxaan horay u amba-qaadnay safar isdaba-joog ah oo lagu hagaajinayo tartankeena asaasiga ah.
Wax soo saarka Deco Sound waa cod dhuuqis iyo qurxin iyo jawi saaxiibtinimo. Dhanka kale, waxay sidoo kale ku qalabaysan yihiin astaamo ay ka mid yihiin kuwa ololka celiya, kuleylka kuleylka leh iyo mid aad u jajaban Waxay ka dhigan tahay in alaabadani ay buuxin karaan shuruudaha heerarka kala duwan ee daaweynta austic iyo qaababka qurxinta ee kala duwan. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa meelaha sida shineemooyinka, qolalka shirarka, istuudiyaha, hudheelada, hoolalka riwaayadaha, xarumaha ganacsiga, iskuulada, jimicsiyada, waababka karaoke, iwm. dibedda.
Shirkadeenu waxay leedahay shatiyadaha farsamada ee gudaha, iyo koox maamul oo heer sare ah. Waxaan si xushmad leh u ixtiraameynaa noocyo kala duwan oo nidaamyo tayo leh iyo nidaamyada ilaalinta deegaanka..Waligood iskama joojin doonno baacsigayaga si aan u noqonno shirkad caalami ah oo heer caalami ah. In geeddi-socodka koritaanka joogtada ah, waxaan had iyo jeer ula dhaqmaan ilaalinta deegaanka, ilaalinta tamarta iyo yaraynta qulqulka sida mudnaantayada. Hadafkeenu waa inaan noqonno summad adag oo ah fiilooyinka bey'ada ku habboon isla markaana si fiican ugu adeegno suuqa adduunka.
Cinwaanka: NO.3 Wadada Dhexe ee Xinzha ， Zhashang Village ， Yangshe Town ， Zhangjiagang City